चिनिमा देखिएकाे रहस्यमय भाइरस दक्षिण कोरियासम्म - ज्ञानविज्ञान
चिनियाँ निकायहरूका अनुसार एउटा रहस्यमय भाइरसका कारण दुई दिनमा १३९ वटा नयाँ सङ्क्रमणका घटना देखिएका छन् ।
योसँगै पहिलो पटक उक्त भाइरस चीनमा वुहानभन्दा बाहिर फैलिएको प्रमाणित भएको छ। बेइजिङ र सेन्जेनमा पनि उक्त भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छन् ।
दक्षिण कोरियामा समेत सोमवार कोरोनाभाइरससँग जोडिएको सङ्क्रमण देखा परेको थियो । जापान र थाइल्याण्डमा पनि सङ्क्रमण भएका छन् ।
वैज्ञानिकहरूले उक्त भाइरसबाट निमोनियाको सङ्क्रमण देखिने भन्दै धेरै सङ्क्रमण अझै थाहा हुन नसकेको हुनसक्ने बताएका छन् ।
युकेमा रहेका विज्ञहरूले संङक्रमितहरूको सङ्ख्या सार्वजनिक गरिएका विवरणभन्दा ठूलो हुनसक्ने जनाएका छन्।
उनीहरूले त्यो संख्या १,७०० आसपास रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सोमबार दक्षिण कोरियाले उक्त भाइरसको सङक्रमण आफ्नो देशमा पनि फेला परेको बताएको छ।
ज्वरो र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याका कारण स्थानीय अस्पतालमा भर्ना भएकी एक ३५ वर्षीया महिला वुहानबाट फर्किएकी थिइन र उनको उपचार भइरहेको छ।
चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य निकायले उक्त भाइरसलाई अझै पनि रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था रहेको जनाएको छ।
उक्त निकायले भाइरसको श्रोत, फैलावट र डीएनएमा देखिएका परिवर्तनका विधि अझै अस्पष्ट रहेको उल्लेख गरेको छ।
थप अध्ययनपछि मात्रै उक्त सङ्क्रमण फैलनुको कारण प्रष्ट हुने उसको भनाइ छ।
कोरोनाभाइरसको जोखिम कम गर्न असुरक्षित जनावरहरूसँग सम्पर्क नराख्ने, मासु र अण्डालाई पूरा पकाएरमात्रै खानुपर्ने र रुघाखोकीको सङ्केत देखिएका बिरामीसँग नजिकै नबस्न सुझाव दिइएको छ।
यो भाइरस के हो ?
सन् २००२ मा चीनमा सार्सले ७७४ जनाको ज्यान लिएको थियो भने ८,०९८ जनालाई संङक्रमित गरेको थियो ।
यसको अनुवंशिक अध्ययनले नयाँ भाइरस सार्ससँग निकट रहेको देखाउँछ ।
कोरोनाभाइरस जनावर र मानिसबीच सर्ने भाइरस हो ।
पहिचान भएका थुप्रै अन्य कोरोनाभाइरस जनावरमा देखिए पनि तिनले मानिसलाई सङ्क्रमित बनाएका छैनन् ।
हामीले याे समचार बी बी सी बाट लिएकाे हाे
Don't Miss it चीनमा देखिएको नयाँ भाइरस के हाे ? यसले सयौँ मानिसलाई सङ्क्रमित बनाएको हुनसक्ने, पुरा पढ्नुहाेस्
Up Next खुट्टा निदाउँने वा झम झम्झम् गर्ने र दुख्ने गर्छ ? यी उपायहरु अपनाउनुहोस् र सजिलै छुटकारा पाउनुहोस्